Iiplatifti ze-GIS, ngoobani abathatha ithuba? -Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Iiplatifti ze-GIS, ezisebenzisayo?
ArcGIS-ESRICadcorpGeospatial - GISGoogle umhlaba / imephuGIS asiboniseMicrostation-Bentley
Kunzima ukushiya iiplatifti ezininzi ezikhoyo, nangona kunjalo kule ngongoma siya kusebenzisa ezo ezasandula IMicrosoft ibona amahlakani ayo ngokuhambelana neSQL Server 2008. Kubalulekile ukukhankanya oku kuvulwa kweMicrosoft SQL Server kumaqabane amatsha, kuba ivumela ukuphathwa kwedatha yendawo ngendlela yemveli; oku ngaphambi kokuba senze kuphela I-Oracle Spatial… Ewe kunjalo kwiindleko zonyaka zokufumana iilayisensi ze- $ 30,000 kwisicelo esiqhelekileyo sobungakanani. Eli thuba lidibanisa iSQL Server ukuze iinkampani zikwazi ukuphuhlisa kule khadibhodi ngaphandle kwesicelo esiphakathi okanye umngcipheko wokuphulukana nembono phakathi kwento esebenza ngokuchanekileyo kunye nezinto ezisisiseko kwinyani yethu.
Masihlole ezinye zala maqabane aseSQL Server 2008:
Le yeyona nkampani yetekhnoloji ye-GIS eyaziwayo kwihlabathi liphela, ukuthengisa kwayo ngonyaka kungaphezulu kwe-660 yezigidi zeedola kwaye ukusuka kwiinguqulelo zokuqala ze-3x kuye kwaqiniswa de kwasetyenziswa kwinqanaba ledesktop kwaye i-ESRI isanikezela ngenkxaso kwezi mveliso. Ukongeza, i-ESRI ibonelela ngeenkonzo kwiinkampani ezinkulu kwaye abameli bendawo babonelela ngenkxaso, uqeqesho kunye nokuthengiswa kwemveliso, ngokubanzi banelizwe elinye okanye ilizwe ngalinye, nangona iimveliso zabo ngoku zingafumaneki kubameli abasemthethweni kuphela.
Izisombululo zinamandla kakhulu, nangona kunzima ukuqonda iindleko zokugqibela ngenjongo zophuhliso ngenxa yeendlela ezahlukeneyo zezicelo zebhokisi ngaphakathi kwesiqu.
Iinguqu zokuqala zihlala zikhoyo ARCview 3.20 Iya kwi- $ 750 nangona ezi zinyamalala ngakumbi yonke imihla ngenxa yeqonga ledatha elinomda. Bambalwa abantu abanesibindi sokuphuhlisa usetyenziso, ngokubanzi bayisebenzisa ngakumbi kwidesktop.
Emva kwezinto ezidlulileyo iimveliso ezisetyenziswa kakhulu ARCgis desktop, ngokuqhelekileyo kuthiwa yi-ARCmap ehamba nge-$ 1,500 kwi-PC kunye ne-$ 3,000 kwilayisenisi ejikelezayo, kuxhomekeke kwimfuno yokwandiswa.
Emva koko kukho ARCeditor ohamba nge $ 7,000
Y ARCserverEbandakanya yintoni ArcIMS ($ 12,000), ArcSDE ($ 9,000) kunye MapObjects ($ 7,000), ezi ngoku ngexabiso ArcServer malunga 35,000 ... iliso $, nganye iprosesa kuthetha ukuba xa Umncedisi Processors ezimbini iindleko $ 70,000
Ngaphandle koko kukho inqwaba yezixhobo, izandiso kunye neenguqu eziguqulelwe ngokweenkcukacha malunga nayo yonke imfuno.
Enye yeenzuzo ezinkulu kukuba lula ukufumana abasebenzisi abakhethekileyo okanye abaqhubi ukuba bathande uphawu, ubuncinci kwizicelo ze desktop; ukuphuhlisa, imoto okanye iwebhu kufuneka ukhulise ukukhangela nangona ukuhambelana kwayo kunye neelwimi zophuhliso kunye nemigangatho yedatha ye-DBMS yenza izinto zibe lula. Iinkonzo zolwazi zikhoyo emhlabeni wonke, nangona yonke imihla ezinye iiplatifti zingaxhunyezwa kule nkonzo.
IQumrhu loPhuhliso loNcedo lwekhompyutha (Limited Cadcorp)
Ezi mveliso zisetyenziswa kakhulu eYurophu, zazalelwa eNgilani, kodwa ngoku ziya kungena kwimarike yaseMntla-Amerika, ngakumbi i-United States neMexico oku kulungile kuba kuthethwa ngenkxaso caliche AmaSpanishi. ICadcorp iyayixhasa intshukumo ye-OGC, isenza ukuba iimveliso zayo zihambelane nale migangatho.
Phantse zonke iinkqubela zalo zikho ngohlobo lweC ++, ukubonakala kwayo kufana ne-Windows okwenza kube lula kwaye iimveliso zayo zichaneka ngokucacileyo, ubuncinane zingagcinwa kwiipulatifomu zokusebenza ezisisiseko:
Umbukeli wemephu, uMphathi weMephu, uMhleli weMephu kunye neModeli yeMephu. Amaxabiso anokuvela kwi- $ 1,500 ukuya kwi- $ 4,000 kuxhomekeke kumthengisi nakumthengi; ).
ngoko kukho iipulatifomu zophuhliso
I-CDM Modeller, uMlawuli we-CDM kunye ne-CDM Viewer, amaxabiso angakwazi ukuhamba nge-$ 7,000 nganye ngumprogram
Kwinqanaba eliphambili kakhulu i-Develloper kit kwiiklasi zayo zokuqala, i-Enterprise kunye neWebhu.
Yeyokuqala kutshanje, kodwa inamandla angaqhelekanga. Le nkampani imele ukuba yazalwa kwiqela le-gurus yeplanethi ye-geospatial eyayicinga "indlela yokwenza isixhobo senze i siseko ", kwaye baphumelele imveliso enokunyuka.
Kuqala kubonakala ngathi bubuqhetseba, ukucinga ukuba sisixhobo esiyi- $ 245 ke banikezela ngembuyiselo ukuba akukho lwaneliseko kwiintsuku ezingama-30. Iindlela abaye bakwazi ngazo ukunciphisa iindleko okanye ubuncinci into endicinga ukuba abayithengisi imveliso yebhokisi, kodwa bathumele isitshixo sokuvula, akukho zincwadi ziprintiweyo kodwa zedijithali, abanazo abathengisi, zithengwa ngokuthe ngqo kwaye kuphela kwi-Intanethi. Le yimiba ethatha ithuba lakho kwinqanaba lenkxaso yendawo, kwaye yonyusa ukubanakho kwabo banakho ukubonelela ngezi nkonzo (uphuhliso, ukumiliselwa kunye nenkxaso). Eyona nto imothusayo yindlela abaphatha ngayo amaphepha-mvume, aba bantu kwafuneka kuqala bayile inkqubo yeelayisensi kwaye emva koko imodeli yeshishini hehe. Ekugqibeleni, ayikho enye into ngaphandle kokuthengisa ii-activations ezi-5 ngexabiso eliphantsi, ucinga ukuba kwiminyaka emibini nayiphi na iqonga lekhompyuter eliya kuphelelwa lixesha, ke xa inguqulelo entsha iphuma, bathengisa ukuvuselelwa kwelayisensi kwi-50 yeedola, kodwa zonke ezi-5 zenziwa zasebenza kwakhona iilayisensi ... inomdla, ngakumbi ukuba siyaqonda ukuba i-ESRI ithandwa kakhulu kwiLatin America kodwa uninzi lweelayisensi ziphangiwe.
Eziphindaphindeneyo zinendlela ebonakalayo yokukala iimveliso, nangona eyona nto inomtsalane kukuba imveliso enye ine-API ekwaziyo ukuyiphuhlisa. Ezi rung zezi:
ZoLwazi equka i-IMS ($ 350)
Enterprise (I-$ 475) nale nto unokufunda nokubhala i-geometries natively kwi-Oracle, i-SQL Server 2008.
Yendalo (I-$ 650) Lo yi-Enterprise kunye nokwandiswa kwe-geocoding, ubuqili kunye nezixhobo zangaphezulu
Ultimate (I-$ 950) kunye nale nto ungenza ukutshaya ngokugqithiseleyo njengokuba udala iindleko zeendawo okanye wenze izixhobo ezithile ngokwezixhobo kuba i-Administrator Database.
Ukukhanga kakhulu kubaphuhlisi kukuba ilayisenisi ixesha lokuqalisa banokuphuma kwi-$ 120, oku kwenza ukuba incedo inzuzo yokuthengisa.
Abo bakhankanywe ngezantsi ababoneleli ngeenkonzo ezininzi ezifana nezidlulileyo, kodwa zikhankanywe yiMicrosoft njengoko zihambelana neSQL Server 2008.
AWhere, Inc, yinkampani yokubonisana kwindawo ye-GIS ngokubonakalayo kunye nokuqhelaniswa nezoBuchule boBuchule, baxhasa yabo imveliso I-software yolwazi yebalazwe. Isebenza phantsi kwelogic efana ne-Manifold, kuba iimephu azikho eluhlaza, kodwa kwindawo yogcino lwedatha nakwenzayo kukubonakaliswa okunamandla okuphumela kwifom yemephu. Inokuhambelana neefomathi ezahlukeneyo kunye noMhlaba oBonakalayo.
IDV Solutions inikeza imveliso ebizwa ngokuba Seva Fusion Server, ejoliswe kwiinkonzo zewebhu ngeendlela ze-GIS apho ababoneleli beenkonzo abanokudala imveliso ebonakalayo kwinqanaba lokubonisana, ukuboniswa kunye neenethiwekhi zokusebenzisana.
I-Barrodale Computing Services Ltd. (BCS)
BCS yinkampani iinkonzo zobuchwepheshe ukuba ubekhona ukusuka 1978 kunye GISTXten yayo imveliso emiselwe kakhulu ekuboneleleni data noun izakhono, ukuze iinkqubo khangela entsonkothileyo, imisebenzi okanye iinkqubo kube lula ukuba ukusebenza ngcono.
Iinkqubo ze-IntraGIS zikhuthaza imveliso ye-IntraGIS, ekujolise kuyo kumqondo abawubiza ngokuba yiLayers Layers ifuna ukulungelelanisa ulawulo lwedatha, kwimigangatho ye-OCG, eyamkela iifomathi zeefayile ezahlukeneyo kunye nemithombo yedatha, kubandakanya iifomati, i-dwg, iitheyibhile kunye neefomati zemifanekiso kuzo zombini i-intranet njengewebhu. Ngokwesithembiso sayo, sisixhobo sabasebenzisi abangasebenzisi i-GIS abafuna ukubona iziphumo zedatha ukwenza izigqibo.
I-IS Consulting's (ISC) inyusa imveliso ebizwa ngokuba yiMapDotNet Server, ekuvumela ukuba wakhe ngendlela ebonakalayo usetyenziso lwewebhu lokujonga, ukuhlalutya kunye nokwenza idatha yendawo. Ine-SDK apho abaphuhlisi banokudala usetyenziso olunokuchaphazeleka, oluhambelana ne-Virtual Erth kunye neSilver Light.
Bangabenzi be-FME eyinkonzo ekuvumela ukuba ufunde ngokulula kwaye ubhale idatha yendawo, kunye nokuhamba, ukuguqula nokudibanisa phakathi kwe-190 CAD, GIS kunye neefomathi zeeraster. Baqinisekisa ukuba uninzi lwezinto zinokwenziwa ngaphandle kwenkqubo.
Umcebisi we-SpatialDB unikezela uqeqesho kunye nenkxaso kubaxumi beSQL Server Spatial, ikakhulukazi:
Iinkcukacha zokuphunyezwa kwe-ROI kwi-Benchmarketing
Ukwakhiwa iiseti data uqwalaselo, zombini systematization kunye namaxwebhu iziganeko ezifana ukuguqulwa, ukufuduka, ileta, uyilo, ikhowudi T-SQL, ifoun kunye nokuphunyezwa izimpahla data.
Ukuqeqeshwa nokufundiswa kwidasethi izakhiwo
Ukuphunyezwa kweziseko ze-ROI ngokusebenzisa ukulungiswa kwemveliso yethekhnoloji ekhoyo kwiimfuno zoshishino.
ISpatialPoint inceda imibutho isebenzise ulwazi lomhlaba ukunciphisa iindleko ngokwenza lula iinkqubo. Ubungcali bakhe ngumgca weMicrosoft kubandakanya iVirtual Earht, iMepPoint kunye ne-SQL Server ka-2008. Itekhnoloji yeSpatialPoint yeAtlas ivumela ukuboniswa kwemizobo yeyona datha inzima isuka kula maqonga akhankanywe apha ngasentla. Banikezela ngeenkonzo zokuphumeza kwiimfuno ezithile.
Siya kushiywa kulindeleke oko kwenzekayo kunye nezinye iimpawu eziza kuthi iSQL Server ayikhankanyi phakathi kwamaqabane ayo ahambisana ne-2008 version, njenge-AutoCAD imephu3D, IBentley Geographics, Geomedia kunye nabanye, ukuba nangona iinjongo zabo eziphambili ziyi-geoengineering nazo zenza zazo iindlebe kwi-GIS side.Iziphumo:
TatukGIS naye wenza into yakhe nge-Oracle Spatial